သာသနာအတွက်လိုအပ်နေသောကွက်လပ်တစ်ခု | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← စိမ်းညက်ညီအစ်မဘုရား၌တတိယအကြိမ်တရားအားထုတ်ခြင်းအဆက် –3
တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် . . . →
Posted on June 3, 2012 by chitnge
မြန်မာပြည်သည် အဖက်ဖက်က တိုးတက်နေသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အ မျိုးမျိုး တိုးတက်နေသော ဤခေတ်တွင် မြတ်စွာဘုရား၏ ပဋိပတ္တိသာသနာဘက်ကလည်း တိုးတက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည်။ ပဋိပတ္တိကျင့်စဉ်မှာ ခက်ခဲနက်နဲကြောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စင်တိုင်း သိပါသည်။ သို့သော် ခက်ခဲနက်နဲ၍ ပစ်ပယ်ထားရမည် ဆိုသည်မှာလည်း နည်းလမ်းမကျချေ။ မှန်မှန်ကန်ကန် ကျင့်ကြံ၊ ကြိုးစား၊ အားထုတ်၊ အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်သာ ဖြစ်သည်။
သာသနာ ချစ်မြတ်နိုးသူတို့သည် သာသနာတိုးတက်ရန် ပဋိပတ္တိသာသနာကို အားကိုးမိကြသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာသုံးရပ်၌ ပဋိပတ္တိသည် အားနည်းနေသည်ဟု သုံးသပ်နိုင်သည်။ ပဋိပတ္တိ ကျင့်သည်မှာ ခက်ခဲနက်နဲပါသည်ဆို၍ ပစ်ပယ်ထားရမည်ဟု ပြောဟောသူတို့သည် လမ်းမှားကို လမ်းညွှန်သူများ ဖြစ်သည်။ ဤအရာ၌ လမ်းမှားကို လမ်းညွှန်သူများ တော်တော်များများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ အချို့ကမူ “စိတ်ကို ရှုစရာမလိုပါ” ဟူ၍ပင် ဟောပြောနေကြသည်၊ မခက်ပါလား? ရုပ်နာမ်ဒုက္ခကို ရှုမည်ဆိုလျှင် ရုပ်နာမ်ခန္ဓာထဲ၌ စိတ်ပါရာ စိတ်ပါ ရှုရမည်သာ ဖြစ်သည်။
ယခုတော့မူ တရားဟော ပလ္လင်ပေါ်က စိတ်တိုင်းရှုစရာမလိုဟု ဟောနေသည်မှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ကောင်းသည် (သို့မဟုတ်) မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ ကောင်းသည် (သို့မဟုတ်) အထင်သေးဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။ “မြတ်စွာဘုရား၏ လက္ခဏာရေးသုံးပါး ရှုသတ်ရာ၌ စိတ်ကို အဘယ့်ကြောင့် ကွက်ချန်လိုသနည်း?” ဟု မေးလျှင် ထိုဓမ္မကထိက ဖြေရန် ခက်ပေလိမ့်မည်။
ခန္ဓာသည် ဒုက္ခသစ္စာ ဆိုက်သည်၊ စိတ်သည်လည်း သစ္စာနှင့်ကြည့်လျှင် ဒုက္ခသာဖြစ်သည်။ ဤကား ဗုဒ္ဓဘာသာ လောကုတ္တရာအမြင်ဖြင့် တင်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ စိတ်ကို ဒုက္ခဟု သတ်မှတ်နားလည် နိုင်ပြီးနောက် စိတ်ကိုပါ ရှုရမည်။ ယခု စိတ်ကို ချန်ထားလိုကြသော ဓမ္မကထိကများ အဘိဓမ္မာဆရာများ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ များစွာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။
ရွှေတံဆိပ်ရ အဘိဓမ္မာဆရာ တစ်ယောက်သည် “နိဗ္ဗာန်ကို ချမ်းသာသောစိတ်” ဟု ရေးခဲ့ဖူးသည်။ မိမိသည် ထိုသို့ရေးစဉ်က ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ယခုထက်တိုင် သိမ်းဆည်း ထားသည်။ ခန္ဓာသည် ချုပ်ရမည်ဆိုသည်ကို နားမလည်သော အဘိဓမ္မာဆရာသည် အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းလှပေသည်။ ထို့အတူ ယခုအခါ “စိတ်တိုင်း ရှုစရာမလို” ဟု ဟောသူ ပေါ်နေသည်။ စိတ်ဆိုသည်မှာ ခန္ဓာထဲမှာပါ၍ ခန္ဓာဆိုသည်မှာ ဒုက္ခသစ္စာထဲ၌ပါရာ ဒုက္ခသစ္စာကို အနိစ္စ ရှုရမည်မှာ သတိပဌာန် ကျင့်စဉ်ပင် ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ စိတ်တိုင်းကို မရှုပါနှင့်ဟု ဟန့်တား ပြောဆိုရာ တရားနာ ပရိတ်သတ်ကြီး များစွာ နစ်နာဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။ စိတ်တိုင်း မရှုရ ဟောပြောနေခြင်းသည် တရားနာ ပရိတ်သတ်အား လမ်းမှားသို့ ပြရာကျသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရုပ်နှင့်နာမ်ကို တော်တော် ချစ်မြတ်နိုးနေပုံ ရသည်။ တရားသမားလုပ်၍ ရုပ်နှင့်နာမ်ကို ချစ်မြတ်နိုး နေလျှင်တော့မူ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ကောင်းပေလိမ့်မည်။ ခန္ဓာနိရောဓော နိဗ္ဗာနံ ဟူုသော စကားတော်အတိုင်း ခန္ဓာချုပ်လျှင် နိဗ္ဗာန်သာ ရောက်ရမည်။ ထိုရောက်သော နိဗ္ဗာန်အား မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြင့် သိရမည် ဆိုသည်မှာ အထင်အရှား ရှိသည်။ စတုမဂ္ဂဉာဏေန သစ္ဆိကာတဗ္ဗံ မဂ္ဂဖလာန မာလမ္ဗဏဘူတံ ဟူသော စကားရှိသည်။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို သိရသည်သာ ဖြစ်သည်။
နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုလျှင် ခန္ဓာချုပ်ရသည်။ ခန္ဓာနိရောဓော နိဗ္ဗာနံ ဟူသောစကားသည် လွန်စွာမှ အားကိုးရသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက် အားကိုးစရာ အယူအဆများ မြောက်များစွာ ရှိပါလျှက်နဲ့ အချို့တို့သည် “စိတ်ကို မရှုပါနှင့် နိဗ္ဗာန်သည် ချမ်းသာသော စိတ်ကလေး”ဟု အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်နေကြသည်မှာ လမ်းမှားသို့ ဦးဆောင်ရာကျသည်။ ဤသို့ ဦးဆောင်နိုင်ပေလျှင် စာဖတ်ပရိသတ် တော်တော်များသည် လွဲမှားသော သဘောကို ခံယူမိကြ ပေလိမ့်မည်။
မကြာသေးမီကလည်း “ဘာသာတိုင်းသည် အတူတူဖြစ်သည်” ဟု အော်ဟစ် ပြောဆိုသံများ ကြားခဲ့ရသည်။ ကိုယ့်ဘာသာနှင့်ကိုယ် ကြိုးစား၊ ကျင်ကြံ၊ အားထုတ်၊ လိုက်စား နေကြရာ ကိုယ်ဘာသာနှင့်ကိုယ် နေတတ်အောင် နေရမည်သာ ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကို မနေတတ်ဘဲ “အခြားဘာသာနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် တူပါသည်” ဟု အော်ဟစ်လာသောခါ များစွာ စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာနှင့် အဆင့်နိမ့်အောင် ဟောပြောသကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဤကိစ္စမှာ စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ လွန်စွာကောင်းသည်။ အများသူငါများသည် ကလေး ကျောင်းသားများပါ ဘာသာတိုင်းဟာ အတူတူဟု ယူဆသွားကြလျှင် မခက်ခဲပါလော … စာရေးသူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အခြားဘာသာ မတူပါ၊ သို့သော် လက်တွဲနိုင်ကြောင်း ကောင်းစွာ ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အခြားဘာသာနှင့် မတူကြောင်းကို အတ္တကိလမထနှင့် ကာမသုခလိက ရှောင်ကာ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ လမ်းကို လိုက်ရကြောင်း သေသေချာချာ ဖွင့်အံခဲ့သည်။
စာရေးသူတို့လို ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထူးလေ့လာထားသူတို့ အဖို့တော့မူ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကိုယ့်ကျင့်စဉ်နှင့်ကိုယ် ဖြစ်သည်ဖြစ်၍ ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုယ် ရိုးရိုးသားသား အေးအေးဆေးဆေး ကျင့်ကြံ အားထုတ်ရသည်။ တကယ်တော့မူ အခြားဘာသာများကပင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အဆင့်အမြင့်ဆုံးပါဟု သတ်မှတ်၊ မဲပေး၊ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကို ကမ္ဘာက သိပြီးဖြစ်သည်။ ဤသို့ သိပါလျှက်နှင့် မည်ကဲ့သို့သော မှားယွင်းသော သဘောကို ခံယူကာ “အားလုံး အတူတူပါပဲဟု ဆိုရပါသနည်း?” ဟု စဉ်းစားဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။
ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် “ဗုဒ္ဓဘာသာကို ချေဖျက်လို၍လော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မှားယွင်းစွာ လမ်းညွှန်လို၍လော” ဟု စဉ်းစားဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။ တကယ်တော့မူ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နားမလည်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ နားလည်လျှင် ဤကဲ့သို့ ပြောလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အေးအေးဆေးဆေး၊ မှန်ကန်ကန်၊ ရိုးရိုးသားသား ကျင့်ကြံအားထုတ်သော ဘာသာဖြစ်သည်။ အခြား ဘာသာများကိုလည်း ရန်မလို သကဲ့သို့ လက်တွဲနိုင်သည်။ သို့သော် ရိုးသားသည်၊ မတူသည်ကို မတူကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောသည်။ အခြားဘာသာများကိုလည်း လွဲမှားစွာ စည်းရုံးလိုခြင်း၊ မြှောက်ပင့် ပြောလိုခြင်း မရှိချေ။ ဤကား ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ခံယူချက် ဖြစ်သည်။
အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းသည်မှာ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ထူးထူးကဲကဲ ဤသို့ပြောသည်မှာ ဓမ္မကထိက ဂုဏ်နှင့် မကိုက်ညီပေ။ ဓမ္မကထိကများ ဟောပြောသည်ကို ပြည်သူလူထုအများက လက်ခံယုံကြည် နားလည်ကြလျှင် နောင်တစ်ခေတ် လူငယ်လူရွယ်များ ဤသို့ စွဲမှတ်သွားလျှင် မခက်ခဲပါလော စာရေးသူသည် အချိန်မီ ပြုပြင်၍ မတူညီကြောင်းကို လျှင်လျှင်မြန်မြန် တုန့်ပြန် ပြောဆိုခဲ့ရဖူးသည်။
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်၍မူ မှားယွင်းမှုများလည်း ရှိနေကြရာ ခက်ခဲနက်နဲ သောကြောင့် ထိုအမှားကို မကျော်နိုင်လျှင် ရပ်တန့်နေရမည် ကဲ့သို့ ရှိနေမည်။ ထိုအခါ ပဋိပတ္တိ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မည်သည့်အခါမှ တိုးတက်လာတော့မည် မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် ခက်ခဲနက်နဲသော ပဋိပတ္တိကျင့်စဉ် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန်လည် မှန်မှန်ကန်ကန် ဖော်ဆောင်ရန် လိုအပ်လေသည်။
သတိပဌာန်လေးမျိုးတွင် ကိုယ်ကြိုက်ရာကိုယ် အနိစ္စ ရှုနိုင်သည်ဖြစ်ရာ အနိစ္စရှုလျှင် မြတ်စွာဘုရား၏ အလိုတော်ကျအတိုင်း ကျင့်စဉ်မှန်ဖက်သို့ ရောက်နိုင်မည်သာ ဖြစ်သည်။ ဗဟုသုတရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရှေ့တန်းတင်၍ ပဋိပတ္တိကျင့်စဉ် လုပ်ငန်းခွင်များကို ဖော်ဆောင်သင့်သည်သာ ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလျှင် သာသနာ၏ တိုးတက်ရာ၌ လိုအပ်နေသော ကွက်လပ်အား ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ပဋိပတ္တိကျင့်စဉ်သည် မှေးမှိန်နေသည်။ အချို့နေရာများ၌လည်း ပဋိပတ္တိသည် ဗောက်ချီး ကျင့်နေကြသဖြင့်လည်း အချို့က လက်ညိုးထိုးခြင်း ပြုကြသည်။ ထို့ကြောင့် အခက်အခဲများ လွန်စွာ များပြားနေသည်။ သို့သော် ဤကဲ့သို့ လက်ပိုက်ကြည့်နေလျှင် ဗုဒ္ဓသာသနာ၌ ပဋိပတ္တိကျင့်စဉ် လုပ်ငန်းခွင်သည် မည်သည့်အခါမှ တိုးတက်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ချေ။
ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သော ကျင့်စဉ်များ ပေါ်ထွန်းနိုင်ရန်မှန်ကန်သော ကျင့်စဉ်များ ကျင့်ဖူးသော ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်ကောင်းများ၊ ပညာရှိများ လိုအပ်လျှက် အကျင့်တရားကို ဖော်ဆောင်အပ်ကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသည်။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ဒုက္ခသစ္စာ, နိဗ္ဗာန်, ပဋိပတ္တိ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဒုက္ခသစ္စာ, နိဗ္ဗာန်, ပဋိပတ္တိ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား. Bookmark the permalink.